Arsii Lixaa Keessatti Fincilli Diddaa Gabrummaa Adeemsifamaa Jira. – YEROOBLOG
Arsii Lixaa Keessatti Fincilli Diddaa Gabrummaa Adeemsifamaa Jira.
Yerooblog	News & Views, Oromo Protests, Politics	 February 16, 2016 1 Minute
Fincilli diddaa gabrummaa Godina Arsii Lixa bakkoota garagaraa keessatti adeemsifamaa jira. Jimaata darbe (Guraandhala12/2016) magaala Shaashammannee keessatti cidha deemsifamaa ture irratti sirba Haacaaluu fi Caalaa Bultume dhaggeeffachuu hinqabdan jechuudhan namoota cidharratti argaman dhorkuuf yaalii humnootni mootummaa godhaniin walitti bu’insi uumame.
Yeroo kanattis humnoonni mootumma kunneen dhukaasa banuudhan namoota rasaasan rukutanii madeesani. Namoonni rasaasaan dhahaman afur yeroo ta’an maqaan isaanii Jannu Tashitaa, Shuumii Nagessoo, Roobaa Jiloo fi Habtamuu Fayyisaa jedhamu. Kana booda, guyyoota itti aanan keessatti, mormiin jabaatee itti fufee gara bakkeewwan akka Shaallaa, Siraaroo fi Ajjeetti babala’ateera. Aanaa Shaalaa keessatti, mormiitoonni mana hidhaa diiguudhan hidhamtoota 100 ol akka gad lakkifaman godhaniiru.
Humnoonni mootummaa (Agaazii fi Poolisii Feederaalaa) gara nannoo sanaa deemuudhan uummata shororkeessa turaniiru. Hidhatoonni (milishaa) aanaa Shaallaa tarkaanii fudhataniin humnoota mootumma kudha tokkoo ol ajjeesaniiru jedhameera. Tarkaanfiin humnoota agaazii irratti fudhatamee, mootummaa Wayyaanee waan rifachiiseef, humnoota dabalataa gara Arsii Lixaatti bobbaasuudhaan haga yoona namoonni afur akka ajjefaman gabaasameera.
Mormiin uummata Oromoon sababa Maaster Pilaaniitiin jalqabame ji’a sadii oliif deemsifama ture ammallee itti fufee jira. Sababa mormiin cimaan uummata Oromoorra itti dhufeef Mootummaan Naannoo Oromiyaa Maastar Pilaanii haquunsaa ni yaadatama. Haata’u malee, gaaffiin Oromoo Maastar Pilaanii qofaa waan hintaaneef, mormiin Oromiyaa keessatti bakka garaa garaatti adeemsifamaa jira.
Previous Post QEERROO ‘ABDIISAA BAANCAA’ JEDHAMUUN WALBARAA!
Next Post Amnesty International Demands the Ethiopian government to Release Detained peaceful protesters, journalists and Opposition political party leaders.
One thought on “Arsii Lixaa Keessatti Fincilli Diddaa Gabrummaa Adeemsifamaa Jira.”